Maitiro ekuisa Google Tag Manager uye Universal Analytics | Martech Zone
Maitiro ekuisa Google Tag Manager uye Universal Analytics
Svondo, October 30, 2016 Muvhuro, Zvita 7, 2020 Douglas Karr
Isu tanga tichishandura vatengi kuenda kuGoogle Tag Manager munguva pfupi yapfuura. Kana iwe usati wanzwa nezve tag manejimendi, isu takanyora yakadzika-chinyorwa, Chii chinonzi Tag Management? - Ndinokukurudzira kuti uverenge nezvazvo.
Chii chinonzi Tag?
Chitagi chidimbu chekodhi chinotumira ruzivo kune wechitatu bato, senge Google. Kana iwe usinga shandisa tag manejimendi mhinduro senge Tag Manager, iwe unofanirwa kuwedzera aya snippets ekodhi akananga kumafaira pane webhusaiti yako kana nhare mbozha. Google Tag Manager Ongororo
Kunze kwebhenefiti yekumaka tag, Google Tag Manager ine imwe tsigiro yemuno yekushandisa seGoogle Analytics zvakare iwe yauchazoda kutora mukana. Nekuti yedu agency inoshanda zvakanyanya pane zvemukati marongero evatengi vedu, isu tiri kugadzirisa GTM kune edu vatengi. NeGoogle Tag Manager uye Universal Analytics, tinogona kumisikidza mamwe maonerwo neGoogle Analytics 'Zvemukati Mapoka tisingafanirwe kugadzirisa kodhi yekodhi pane edu vatengi nzvimbo. Kugadzira vaviri ava kuti vashande pamwe chete hakusi kwekushaya moyo, zvakadaro, saka ndinoda kukunyorera iwe.
Ini ndinonyora ramangwana chinyorwa pakugadzira Zvemukati Mapoka neGoogle Tag Manager, asi yechinyorwa chanhasi, ndine zvibodzwa zvitatu:
Maitiro ekuisa Google Tag Manager pane yako Saiti (iine mamwe mashoko eWordPress akawedzerwa).
Maitiro ekuwedzera mushandisi kubva kune yako Agency kuti vakwanise kubata Google Tag Manager.
Maitiro ekugadzirisa Google Universal Analytics mukati meGoogle Tag Manager.
Chinyorwa ichi hachina kungonyorerwa iwe, chaicho danho nedanho kune vedu vatengi zvakare. Izvo zvichatibvumidza isu kubata GTM kwavari uye kuenderera kune ese ari maviri ekugadzirisa kuti zvinyorwa zvekunze zvinotakurwa sei pamwe nekuvandudza kwavo Google Analytics kushuma.
Maitiro ekuisa Google Tag Manager
Uchishandisa yako Google Analytics kupinda, iwe uchaona izvo Google Tag Manager ikozvino sarudzo mune yekutanga menyu, ingotinya Nyorera mu:
Kana usati wambomisikidza Google Tag Manager account pamberi, pane yakanaka wizard yekukufambisa kuburikidza nekumisikidza yako yekutanga account uye mudziyo. Kana iwe usinganzwisise verbiage yandiri kushandisa, ita shuwa kuti utarise vhidhiyo pane ino positi iyo inofamba iwe kuburikidza!
Kutanga, tumidza account yako. Kazhinji, iwe unozotumidza zita iro mushure mekambani yako kana chikamu kuitira kuti ugone kuwana nekugadzirisa imwe neimwe yemasaiti nemaapplication iwe aungave nawo Google Tag Manager akaisirwa zvirinyore.
Iye zvino kuti account yako yava setup, iwe unofanirwa kuseta yako yekutanga mudziyo.
Paunenge wabaya sika, iwe unobvunzwa kubvumirana neMitemo yeSevhisi. Paunenge iwe wabvuma, iwe unozopihwa maviri magwaro ekuisa mune yako saiti:
Teerera iko kwaunoisa aya ma tag tag, zvakanyanyisa kukosha kune hunhu hwemamwe mateki auri kuzotungamira mukati meGoogle Tag Manager mune ramangwana!
Uchishandisa WordPress? Ndingakurudzira zvikuru iyo Duracelltomi Google Tag Maneja WordPress plugin. Patinogadzira Zvemukati Mapoka muGoogle Analytics, iyi plugin inogonesa maficha ane akavakirwa-mukati sarudzo dziri kuenda kukuserera yakawanda yekusuwa!
Kana iwe uri kugadzirisa GTM uchishandisa yechitatu-bato plugin kana kusangana, iwe kazhinji unongobvunzwa yako Container ID. Ini ndaenda kumberi ndikatenderedza izvo mumufananidzo wepamusoro. Usatombo kunetseka nezvekuinyora pasi kana kuikanganwa, GTM inoita kuti uwane zvakanaka uye zviri nyore muakaundi yako yeGTM.
Une zvinyorwa zvako kana plugin yakatakurwa? Zvikuru! Google Tag Manager yakaiswa pane yako saiti!
Maitiro Ekupa Yako Agency Kuwana kuGoogle Tag Manager
Kana iyo yekuraira iripamusoro yanga yakati omei, iwe unogona chaizvo kusvetuka zvakananga kupa mukana kune yako agency. Ingo vhara iyo wizard uye tinya Admin pane yechipiri menyu pane peji:
Iwe uchada kudzvanya Mushandisi Wekushandisa uye wedzera agency yako:
[box type = "warning" align = "aligncenter" class = "" width = "80%"] Uchacherekedza kuti ndiri kupa kwese kuwana nemushandisi. Iwe ungangoda kubata yako agency kuwana zvakasiyana. Kazhinji, iwe uchawedzera yako agency seMushandisi uye wozovapa kugona kweKugadzira asi kwete Shambadzira. Ungangoda kuchengetedza kutonga kweKuburitsa tag kushanduka. [/ Box]
Iye zvino wako agency anogona kuwana yako saiti mukati meGoogle Tag Manager account. Iyi nzira iri nani kwazvo nekuvapa nemazita ekushandisa!
Maitiro ekugadzirisa Google Universal Analytics mukati meGoogle Tag Manager
Kunyangwe hazvo GTM yakaiswa zvakanaka pane yako saiti panguva ino, haisi kuita chero chinhu kusvikira iwe waburitsa yako yekutanga tag. Tichagadzira iyo yekutanga tag Yenyika Dzese Analytics. Click Wedzera Nyowani Tag pane iyo Workspace:
Dzvanya pane tag chikamu uye iwe unozokurudzirwa nesarudzo yemategi, iwe yaunoda kusarudza Yenyika Dzese Analytics:
Iwe unozofanirwa kutora yako UA-XXXXX-X kodhi kubva kune yako Google Analytics script yatove mune yako saiti uye woiisa mune chaiyo chikamu. Usabaya chengeta zvakadaro! Tinofanira kutaurira GTM kana iwe uchida kupisa iyo tag!
Uye, hongu, isu tinoda kuti iyo taki ipise pese nguva imwechete munhu paanoona peji pane yako saiti:
Iwe unogona ikozvino kuongorora marongero ako tag:
Dzvanya ponesa uye iwe uchaona pfupiso yeshanduko dzawakaita. Ramba uchifunga kuti iyo tag haisati yaburitswa kune yako saiti - ndicho chinhu chikuru cheGTM. Iwe unogona kuita matani ekuchinja uye kuongorora ese marongero usati wafunga kushambadzira shanduko dzirarama kune yako saiti:
Izvozvi tag yedu yanyatsogadziriswa, tinogona kuiburitsa kune yedu saiti! Dzvanya Dhinda uye iwe unozobvunzwa kunyora shanduko uye nezvawakaita. Izvi zvinonyanya kubatsira kana iwe uine akawanda manejimendi uye vamiririri vadyidzani vanoshanda mune yako saiti.
[box type = "yambiro" align = "aligncenter" class = "" width = "80%"] Usati waburitsa tag yako inochinja kune yako saiti, ita shuwa kuti bvisa chero epfuura Google Analytics zvinyorwa mukati mewebsite yako! Ukasadaro, uchaona kumwe kufema kwakanyanya uye nenyaya neako analytics kuzivisa. [/ bhokisi]
Boom! Iwe wadzvanya shambadza uye iyo vhezheni inochengetwa ine ruzivo rweye tag tag. Universal Analytics ikozvino iri kushanda pane yako saiti.
Makorokoto, Google Tag Manager iri kurarama pane yako saiti neUniversal Analytics yakagadzirirwa uye yakaburitswa seyako yekutanga tag!
Tags: wedzera mushandisi kuwanagoogle analyticsgoogle taggoogle tag manejagoogle tag maneja wedzera mushandisigoogle tag maneja mudziyogoogle tag maneja inokonzeresagoogle universal analyticsgtmgtm mudziyosei kutigadza google tag manejakuwongorora pejitag managementtag manejainokonzeresa kuona pejiuniversal analytics
Uchishandisa GarageBand Normalization Kugadzirisa Yako Yakaderera Audio Input
Apr 25, 2017 pa 2: 34 PM
Uri fart smella chaiyo - NDINOREVA - smart fella 🙂 Ichi chinyorwa chakanaka - chaizvo zvandaida kuita GTM. Koshesa skrini shots
Apr 25, 2017 pa 2: 38 PM